Shwe | September 3, 2020
လွန်ခဲ့သော ရက်ပိုင်းက ရု ရှားနိုင်ငံ၊ ကာရှ့်ဒေသရှိ ဆေး ရုံတစ်လုံး၌ ဆရာဝန် များကိုအံ့အား သင့်စေသော ရင်ခွဲ ရုံမှလူသေတစ်ဦး ရုတ်တရက် အသက်ပြန်ရှင်လာ တယ်ဆိုတဲ့ ထူးထူးဆန်း ဆန်းအေ ကြာင်းအရာတစ်ခုကို ဖော်ပြချ င်ပါတယ်။ အသက် ၈၁ နှစ်အရွယ်ရှိ “ဇီနိုင်ဒါ ကိုနိုနိုဗာ” ဆိုသူ အဖွားအို သည်
Shwe | August 31, 2020
တရုတ် နဲ့ အေ မရိကန် တို့ ပြိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့ နေ ရာမှာ နောက်ဆုံး ပြိုင်ကွင်း တစ်ခုက အင်္ဂါဂြို ဟ်ခေါ် မား စ်ပေါ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်နိုင် ငံစလုံး က ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လ အတွင်းမှာ အင်္ဂါဂြိုဟ် စူးစမ်းရေး အာကာသ ယာဉ်တွေ လွှတ်တင်ခဲ့
လွန်လေ ပီးေ သာ နောင်တ လက် တွေ့ကျမှ သိကြ ပီပေါ့… ပြောလိုက် တဲ့ စကား အရှက်တရား ဆိုတာ ဘယ်မှာ ရှာရမှ န်းမသိ…တောင်းပန်တာ တောင် မှ အသားယူပြောတ တ်တဲ့ လူစား မျိူးတွေဘဲ…. ဘာတဲ့. မိမိနိူင်ငံဟာ သူတပါး အပေါ် တစ်လက်မမှ ကျူးကျော်ခြင်း
Shwe | August 19, 2020
အွန်လိုင်း မှာ လူကြည့်များနေတဲ့ နေပူထဲ မှာ PPE ဝတ်စုံ အပြည့်နဲ့ အလုပ်လုပ်ကိုင်ေ နရတဲ့ သူနာပြုတွေ ရဲ့ ဝတ်စုံထဲမှ ချွေးရည်များ သွန်ချနေ ရတဲ့ (ရုပ်သံ) မကြာသေးခင်က တရုတ်နိုင်ငံမှဆေး ဝန်ထမ်း အမျိုးသမီးဟာ အနားယူဖို့သူ မရဲ့ PPE ဝတ်စုံကိုချွတ်ခဲ့ ပြီးနောက် ဝတ်စုံထဲမှ စီးကျလာတဲ့
အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ က YouTuber တစ်ယော က်ရဲ့ ကင်မ ရာရှေ့မှာ ဘားမှမ လုပ်ပဲ 2နာရီနဲ့2မိနစ်ကြာသ ည်အထိ ထိုင်နေခဲ့တဲ့ video ဟာ ကြည့်ရှုသူပေါင်း 2.9 million အထိရရှိခဲ့ပါတယ် ။ Muhammad Didit အမည် ရှိတဲ့ YouTuber ဟာ
ကိုဗစ်ေ ကြာင့် ကျောင်းေ တွပိတ်ထား ရပေမယ့် စေတနာကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ် တစ်ခုကြောင့် အမြင့်ဆုံး ဂုဏ်ပြုတံဆိပ် ရခဲ့တဲ့ ကျောင်းဆရာမ
မက္ကစီကို မှာ ကျောင်းတွေ ပိတ်လိုက် ရတော့ ကျောင်းဆရာမ တစ်ေ ယာက်ဟာ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ထရပ်ကား ကို ကျောင်းကား အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့တယ်။ နေ့တိုင်းနီးပါး ကို ဝေးကွာလွန်း တဲ့ မက္ကစီကိုေ ကျးလက် ရွာတွေဆီကို ၂ နာရီလောက် ကားမောင်းသွားရတယ်။ အဲဒီ ကျေးလက်ရွာေ တွမှာတော့
Shwe | August 18, 2020
ဒူ ဘိုင်း အိမ် ရှေ့ မင်းသား Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Makt oum က တော့ Fazza လုိ့ လူသိများပြီး တစ်ချိန်မှာ ဘုရင် ဖြစ်လာမယ့် လူပါ။ လက်ရှိ မှာလည်း စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ ကိစ္စ
Shwe | August 17, 2020
ငယ့်ဘဝ က ဘယ်ေ လာက်ပဲ အောင်မြင်ပြီး ၊ ထိပ်ဆုံး မှာ ရပ်တည် နေပါစေ ဘဝ တစ်ေ လျှာက်လုံး ကိုယ့်ကို ပြုစုစောင့် ရှောက်ခဲ့ကြ သူတွေ ၊ မိဘတွေ ကိုတော့ မမေ့သင့်ပါဘူး ။ ဒီတစ်ခေါ က်ဖော်ပြမဲ့ ကောင်လေးတစ် ယောက်ဟာ လည်း သူ့ရဲ့ရ
သဂုတ် – ၁၁ ၊ ၂၀၂၀ ရုရှား ၏ ကမ္ဘာ့ ပထမဆုံး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် စ် ကာကွယ်ဆေး ကို ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာန က ထောက်ခံ အတည်ပြုကြောင်း သမ္မတပူတ င်ကြေညာ။ ၄င်း၏ သမီးလေး မှာ ကာကွယ် ဆေးထိုးနှံပြီးဖြ စ် ဟု ဆို ။